वैमनस्यता उल्झाउने युएईको एउटा भेला « Postpati – News For All
वैमनस्यता उल्झाउने युएईको एउटा भेला
बिनोद श्रेष्ठ, युएई । भुलचुक वा संयोगवस एकहप्ता अगाडी राजदुताबास युएईमा हुने एउटा अन्तरकृया कार्यक्रमको कार्यतालिका सामाजिक संजालमा बाहिरियो। मानब तस्करी र श्रमिकको समस्या र समाधानको उपाय समन्धि अन्तरकृया नामक सामाजिक बिषयबस्तु माथी छलफल र राजनितिक प्रतिबद्दता सहित उक्त अन्तरकृया कार्यक्रममा बहस हुने भनेर ।
कार्यतालिकामा एबिसी संचालन रहने गरि सिमित राजनितिक ब्याक्तित्व, एनआरएन युएईका अध्यक्ष रमेश श्रेष्ठ, सहित केही पत्रकारलाई मात्र कार्यक्रममा निमन्त्रणा गरिएको रहेछ। त्यो पनि दुताबास युएईको सभाहलमा।
तस्बिर: दूतावास परिसरमा भएको कार्यक्रम फेसबुकबाट साभार
हामी श्रमिकहरू खुशी थियाैं। किनकी युएईमा माैंलाउदै गएको भिजिट भिषा, मानब तस्करी बिरूद्द आवाज उठाउने माैका मिल्ने भयो भनेर, तर बिडम्बना करिव तिन लाख कामदार रहेको युएईमा सिमित राजनितिक ब्याक्ति र आफन्तलाई मात्र कार्यक्रमा समाबेश गरेकोले कार्यतालिका अनुशार का.बा. महामहिम सागर फुयालसँग सम्पर्क भयो। कार्यक्रम दुताबासले आयोजना नगरेको, कुनै समुह वा संस्थाले आयोजना गरेको हो। कार्यक्रमको बिषय सकारात्मक भएको जानकारी दिनु भयो।
ग्रुप च्याटमा यस बिषयमा छलफल भएको हो। तर कार्यक्रम कस्ले र किन राखेको थाहा नपाएको जनसम्पर्क समितिका पु्र्व सभापति चित्र केसीले बताए। उनले कार्यक्रममा सबै तह र तप्काका ब्याक्तिहरूलाई समेट्न नसक्दा दुख ब्यक्त गरे। आयोजक आफु र आफ्नो संगठन नभएकोले धेरै बोल्न चाहेनन्। नेपाली प्रबासी मन्च युएईका अध्यक्ष श्याम कंडेलको अगुवाइमा हुन लागेकोले यथार्थ बिबरण उनै सँग लिन अनुरोध गरे।
यो कुनै संघसस्था, संगठनको कार्यक्रम नभएर, मेरो आफ्नो ब्याक्तिगत कार्यक्रम हो नेपाली प्रबासी मन्च युएईका अध्यक्ष श्याम कडेलले भने।यस बिषयमा आफ्नो संगठनमा पनि छलफल भएको छैन। मेरो एकल प्रयासमा युएईका बरिष्ठ ब्याक्तित्वहरूलाई निमन्त्रणा गरेको बँताए। कार्यक्रममा पत्रकारहरूलाई नबोलाउने योजना थियो, तर साथीहरूको आग्रहमा बोलाए पनि पत्रकारको संख्या धेरै भएकोले काटछाट हुन सक्ने जनाएका थिए। कार्यक्रम शुरू नहुदा सम्म अन्य केही समाजिक ब्याक्तितवहरूलाई समेट्न सकिने उनको तर्क थियो।
मानब तस्करी र श्रमिकको समस्या र समाधानको उपाय समन्धि अन्तरकृया गत शुक्रबार दुताबासमा सम्पन्न भयो। जसमा ७ बुदे प्रतिबद्दता सहित ५ सदस्यीय समिति चयन भए। उपस्थिति मध्यबाट नै नेपाली प्रबासी मन्च युएईका अध्यक्ष श्याम कंडेल, पत्रकार महासंघ युएईको अध्यक्ष भुपराज बस्याल, जनसंपर्क समितिका पुर्ब सभापति चित्र केसी र एनआरएन युएईका अध्यक्ष रमेश श्रेष्ठ र नेपाली जनप्रगतिशिल मन्च युएईका अध्यक्ष बाबुराम बिश्वकर्माको समिति बन्यो।
सामाजिक संजालमा सर्बत्र बिरोध भयो। राजनितिक एकल ब्याक्तित्वले सिमित र मन परेका ब्याक्तिलाई मात्र निमन्त्रणा गरेर नेपाली दुताबासमा गोप्य कार्यक्रम गरेकोले सबै सरोकारवालाहरूको ध्यान केद्रित बन्यो।
सामाजिक बिषयका मुद्दाहरू उठाएर आफ्नो राजनितिक छबिलाई उच्च राख्न दुताबासको चाैंकी प्रयोग गर्न पाईन्छ ? अन्तरकृयाका बिषयबस्तुहरू जाहेज छन्। तर युएईमा रहेका क्रियाशिल संघसस्थाहरू छन्। जसमध्य नेपाली समाज पनि एक हो। खाडी युद्दकाल सन् १९९० देखि सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्दै आएको एक मात्र पुरानो संस्थालाई बाईपास गरेर यस्ता सामाजिक काम ब्याक्तिको नाममा गर्नु राम्रो हो? युएई सरकार (दुबई) बाट मान्यता प्राप्त संस्था हामी नेपाली, बिजनेश काउन्सिल जिउदै छन्।
गत केहि बर्ष देखि युएईमा भएका सामाजिक संघसस्थाहरू बिच एकता , सत्भाब र सहकार्य गर्दै सामाजिक गतिबिधिहरू हुदै आएको छ। सामाजिक कार्य, सास्कृतिक कार्यक्रमहरू तथा राहत उद्दारमा एक बद्दता जनाउदै आएका छन्। यस्ता सामाजिक बिषयबस्तु माथी भएको अन्तरकृया कार्यक्रममा समन्वयको कमिले युएईमा रहेका संघसस्था बिच हुदै आएको एकबद्दता बिथोलिने त हैन?
दुई राजनितिक दल र केही सिमित बिसिष्ठ ब्याक्तित्व बिच भएको कार्यक्रमले युएईमा रहेका अन्य संस्था र सामाजिक ब्याक्तित्वहरूको बिना छलफल तिन लाख नेपाली कामदारहरूको समस्या समाधान हुन सक्छ?
यस्ता सामजिक कामहरू युएईमा रहेका हरेक संघसस्था र सामाजिक ब्याक्तित्व, ब्याबसायीहरूको सहमति, सहभागिता र सहयोगले मात्र संभब छ। उदारहणको लागी २५२६ औ बुद्द जयन्ती, टोपबहादुर बँचाउ अभियान। यि पात्र मात्रै हुन्, संघसस्थाहरूले सहयोग नगरेको भए यो संभब थियो? अरू टोपबहादुहरू फेरी जन्मन सक्छन्।
एउटा राजनितिक पात्रले करिब ३ लाख नेपाली कामदारहरूको पबित्र मन्दिर भित्र महामहिम र अन्य कर्मचारीलाई प्रयोग गरि कार्यक्रम गर्न पाउदा अन्य राजनितिक पार्टी, जातिय संस्था, ब्याक्ति,वा झुण्डले सामाजिक बिषय बस्तुको मन्चन गरि कार्यक्रम गर्न पाउने कि नपाउने? यसको जबाफदेहिता दुताबास हुनै पर्छ। हैन भने, दुताबासको महामहिम,लगाएत अन्य कर्मचारीलाई आफ्नो बसमा परेर यस्ता खाले ब्याक्तिगत क्रियाकलाप तुरून्त बन्द हुनु पर्छ।
उपस्थित कतिपयले बिरोधको पनि आलोचना गरेका रहेछन्। बिषयबस्तुको उठान राम्रो छ। सामाजिक बिषयबस्तु माथी हाम्रो बिरोध हैन।तर, सहभागी र बिषय उठान गरेका कतिपय ब्यक्तिहरू माथी हाम्रो चासो हो।
गत महिना एनआरएन युएईको बार्षिक कार्यक्रम पनि यस्तै बिबाद भयो। संघसंस्था, पार्टी, झुण्डका नाईकेहरूले आ आफ्नो संगठनमा रहेका बिबादित ब्याक्तित्वहरूलाई काँधमा बोकेर हिड्ने,अनि सामाजिक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीको जस्तो भाषण गरेर कार्बाही गर्नै,आफ्नो संगठनबाट बहिस्कार गर्ने,धोषणा गर्नु कतिसम्मको हस्यास्पद तर्क हो।किन सक्दैनन्,यस्ता दलाल,मानब तस्कर,अनि हुण्डि वालाहरूको सदस्यता खोस्न? किन सक्दैनन् सामाजिक कार्यक्रम बहिस्कार गराउन?
अब सबैको सोच्ने बेला आएको छ,राजनितिक चेतनाको स्तर बड्दैमा समाज परिबर्तन गर्न सकिदैन।